Ezimweni eziningi, ukungalingani hormone emzimbeni womuntu wesifazane eqala ukukhula izinwele ebusweni. Uma wathola ukubukeka kwabo futhi baye baqaphela ukukhula anda, ngokushesha nokufuna usizo lochwepheshe. Kungenjalo, Ukungadli kungabangela izifo ezimbi nakakhulu eziholela ebuthaka ukubukeka. Ngesikhathi Inkambo yokwelashwa Ungasusa uboya obungathandeki ngezindlela ezihlukahlukene.
Izidakamizwa "ethacridine lactate" ( "rivanola") ngoba izinwele ukususwa
Impendulo kulabo abaye esetshenziswa leli thuluzi ukubuyisela olubushelelezi of isikhumba ebusweni, zihlukile. Ukulungiselela ngokwalo eyenzelwe le njongo. Kuyinto isinqandakuvunda, okuyinto esetshenziswa ukuhlinzwa, nezesikhumba, ukusebenza kwayo nezifo zabesifazane, zamehlo, Urology. Nokho, isetshenziswa "rivanola" isixazululo hair ukususwa, kanye eziningi eziyimpumelelo kakhulu. Ngakho-ke yini kusebenta yayo? Kuyinto ethandwa futhi waqaphela njengoba ikhambi Folk. Izidakamizwa "rivanola" ebhubhisa follicle izinwele, ke thins. Avamile ukucutshungulwa ezindaweni uboya obungathandeki ebusweni kuholela yokuthi ayanyamalala ngokuphelele. Nokho, ukusetshenziswa kahle "rivanol" belungiselela izinwele ukususwa (izilinganiso qinisekisa) kuphela endabeni yokwelashwa eziyinkimbinkimbi. ukuhluleka kwama-hormone emzimbeni kudinga Luhlolo edlulayo futhi enquma, okuzokwenza uyibuyisele operation evamile. Uma kungenjalo izinwele isazoqhubeka ivele ubuso, nganoma iyiphi indlela ungenalo isusiwe.
Umthamo kanye contraindications
Umuthi itholakala ngendlela amaphilisi, impuphu, ayinhlama, izimpushana dusting. isixazululo okwakudingeka ukuze kwakhiwe leli inqubo (1%), okungase ngokuzimela okulungiselelwe. Thatha 10 amagremu ubhuqu chaza ilitha lamanzi. Inani elincane le isixazululo ku idiski ukotini ukuvuza futhi Sula izindawo embozwe izinwele. Feza inqubo kungaba akukho kuka 1 isikhathi ngosuku. Bangaki udinga ukusebenzisa ngephesenti elilodwa "rivanola" kusho isixazululo izinwele ukususwa? Izibuyekezo sithi othile uzuze imiphumela lenqubo ezimbili, bese kuba khona umuntu wathatha eziyisithupha. Qiniseka ukugcina olinganise, njengoba kuba izidakamizwa, futhi ine Izimo. Abantu ne ezinzima isifo sezinso sebenzisa indlela hair ukususwa is hhayi Kunconywa. Esikhathini igrafu e yokusetshenziswa "Contra" eboniswa ku izifo kwezinso ephelezelwa khona amaprotheni ku umchamo. Ungakhohlwa mayelana nokwenzeka komzimba. Ngaphambi inqubo ukwenza isivivinyo, ukuqinisekisa tolerability ezinhle le-ejenti.
Ukusebenzisa izidakamizwa "rivanola" izinwele ukususwa (inani lutholakala kalula) ikuvumela ukuba enze inqubo ngokushesha, ngendlela ephephile futhi nangokonga. Nokho, umphumela ukusetshenziswa kwezimali, njengoba besho abathengi akuzona omuhle njalo. It incike kumuntu. Ungazama ukulungisa "rivanola" izinwele ukususwa (izibuyekezo siliqinisekise) izinyawo nezandla. Le ndlela kuzokwenza isikhumba sakho bushelelezi isikhathi eside. Uma ungenayo contra-izinkomba, ukusetshenziswa kwezidakamizwa "rivanola" elinye ithuba waxing.
Umnotho Greece manje (kafushane). Izimpawu emnothweni ngesiGreki. Umnotho we Ancient Greece